Silaovakia: Mitsipaka ny fahaleovantenan’i Kosovo · Global Voices teny Malagasy
Nivoaka ny 25 Jolay 2008 1:02 GMT
Nanambara ny fahaleovantenany ny Repobilikan'i Kosovo tamin'ny 17 feboroary 2008. 43 amin'ny 192 mpikambana ao amin'ny Firenena Mikambana no manaiky ny fahaleovantenan'i Kosovo ary tafiditra amin'izany i Etazonia, Kanada, Aositiralia ary ny ankamaroan'ny mpikambana ao amin'ny vondrona Eoropeana. Fa ny tena malaza manohitra kosa — aorain'i Seribia — dia i Rosia.
Nanambara ny goverinemanta Silaovàka volana vitsivitsy lasa izay fa tsy hanaiky ny fahaleovantenan'i Kosovo. Ary nanambara ihany koa ny minisitry ny raharahambahiny Silaovàka fa tsy handray antontan-taratasy avy amina Kosovo mahaleo tena izany, ary tafiditra amini'zany ny pasipaoro Kosovara. Hoy Peter Martinovic, mpamaham-bolongana Silaovàka :
Ity lohahevitra ity no iray amin'ny vitsy dia vitsy iraisan'ny tontolo politika Silaovàka manontolo hevitra. Avahana manokana amin'izany ny Antokon'ny vitsy an'isa Haongoroà , fa ny antoko politika rehetra na miara-dia ihany amin'i Eoropa na miara-dia tanteraka amin'ny fiarahana amin'i Eoropa dia niray hevitra hitsipaka ny fahaleovantenan'i kosovo. Ny anton'izany tsy noho ny fisavorovoroana niainana nandritra ny taonjato faha-XX ihany, fa eo koa fahatsapan'ny olom-pirenena amin'ny ankapobeny fa […] miaina any atsimo misy ny tena tombotsoan'ny firenena ny vitsy an'isa Haongoroà ary mikasa mandrakariva izy ireo ny hiendaka amin'ny firenena ka hikambana amin'ny firenena Haongoroà
Raha tonga amin'izao toerana maoderina misy azy izao i Silaovakia dia nanana anjara toerana lehibe tamin'izany ny Fitondram-panjaka Haongoroà. Teo ambany fahefan'ny Haongoroà nandritra ny taonjato maro manko ny Silaovàka. Fotoana maro tamin'izany no nitoloman'izy ireo hanan-jo ho vondrom-poko iray sy ny fahaleovantena avy eo. Taorian'ny ady lehibe voalohany no niforona i Tsekôsilaovakia. Rehefa voafaritra indray ny sisintany dia hita fa lasa nisy Haongoroà tafiditra ao anaty fizarantanin'i Tsekôsilaovakia. Ankehitriny dia misy 10%n'ny mponina raha kely indrindra ny Haongoroà mandrafitra ny isan'ny Silaovàka, ary mihoatra ny 40% aza any atsimon'i Silaovakia.
Ity kosa misy fomba fijery hafa , nasehona Silaovàka 24 taona manana anarana hoe Jan, ao amin'ny bolongana Us Europeans:
03 Avrily 2020Eoropa Afovoany & Atsinanana